News Collection: मेलोडी क्वीन
काठमाडौ, आश्विन २२ - तपाईले पनि उनले गाएको मिठो गीत गुनगुनाउनु भएको होला । अथवा, कुनै एफएममा उनको गीत बज्दा त्यसले तपाईलाई छोएको होला । अझ उनका सयौँ गीतमध्ये कुनै तपाईको मोबाइलको रिङ टोनसमेत होला ।
हो, अञ्जु पन्त अहिलेकी चल्तीकी गायिका हुन् । तर जसरी उनका कर्णपि्रय गीत हामीले त्यति मिहिनेतै नगरी कानमा ठोक्किन आइपुग्छन्, त्यसविपरित यी व्यस्त गायिकालाई भेट्न त्यति सजिलो भने रहेनछ । झण्डै तीन महिनायता हेलो शुक्रबारले उनलाई सम्पर्क गरिरह्यो । त्यसबीच उनी दुई महिने टुरमा अमेरिका गइन् । फर्केर आएर फेरि इजरायल गइछन् । अन्ततः उनी मोबाइल सम्पर्कमा आइन् । तर त्यतिखेर उनी पोखरामा थिइन् ।
हालैको एक शुक्रबार विहान उनले सुन्धारामा भेट्न बोलाइन् । 'त्यहाँ आएर फोन गर्नुस्, म इमेज अवार्डको रिहर्सलमा हुन्छु,' गायिकाको स्वर सुनियो । ठिक समयमा त्यहाँ पुगेर फोन गर्दा तीन-चार पटक त उठेन । अन्ततः उनले फोन उठाउँदै आफु थानकोटमा भएको जानकारी दिइन् । 'तपाईलाई मैले धेरै दुःख दिएँ है,' सहाभूतिपूर्ण स्वर सुनियो, 'भरे तीन बजे त्यहाँ पुलिसको अफिस छ रे नि, त्यहीँ आनुस् ।' त्यो प्रहरी कार्यालय नभएर आर्मी हेडक्वार्टरस्थित हल रहेछ जहाँ शनिबार (असोज १६ गते) इमेज अवार्ड हुँदै थियो ।
'तपाईलाई भेट्न त धेरै गाह्रो रहेछ,' हलको पछिल्तिर एक नर्तकी र अर्की एक गायिकासँग बसेकी उनलाई भनियो । उनी केही सम्झेझै गरी हत्तपत्त उठिन् र अन्तर्वार्ताका लागि तयार भइन् ।
दायाँ हातमा मोटो कालो चुरा लगाएकी, नीलो जिन्स र नीलै पुलओभरमा सजिएकी यी खिरिली गायिकाका फ्यान किशोरकिशोरीदेखि वृद्धवृद्धासम्म छन् । हुन त उमेर भनेको दुई अंक हो (तीन अंक अर्थात् सय नाघ्न त निकै भाग्यमानी हुनुपर्ला) । तर ९ वषिर्या छोरी -परितोषिका) भएकी यी नत्थीवाली गायिका आफ्नो उमेरभन्दा निकै कम देखिन्छिन् (उमेर नलेखिदिन उनले गरेको आग्रह स्विकारिएको छ) । अझ कलरिङ गरिएको उनको केश र चञ्चले स्वभावले उनलाई किशोरी हुन् भन्ने गाह्रो पर्दैन ।
कसरी शुरु भयो त कतिपयले 'मेलोडी क्विन' भन्ने गरेकी यी गायिकाको सांगीतिक यात्रा ? १३ वर्षअघि रेडियो नेपालमा आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम भएपछि शुरु उनको यात्रा अविरल छ । त्यसैबेलादेखि उनलाई मन पराउन थालेका उदयपुरका गायक/संगीतकार मनोजराजसित उनको विवाह भयो (अन्तर्वार्ताको क्रममा उनले आफु स्थापित हुनुमा पतिको योगदानको गुणगान गाउँदै पटक-पटक उनको नाम नछुटाउन आग्रह गरिन्) ।
'अहिलेकी सबैभन्दा महँगी गायिका भनेर लेख्नुभए हुन्छ,' हलभित्र रिहर्सल गरिरहेका गायक शिव परियारको स्वरले हाम्रो कुराकानीमा बाधा पुर्‍याएपछि उनलाई शुरुमा भेेटेकै स्थान -चौर) मा पुग्नासाथ उनले भनिन् । त्यो महँगीको मापन के त ? काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका कार्यक्रममा गाउँदा उनले एक पटकको ६०-७० हजारसम्म लिदिरहिछन् । 'विदेशमा त २ लाखसम्म लिन्छु,' उनले सुनाइन् । 'भोलिका नानीहरुलाई सजिलो हुन्छ,' उनले आफु व्यावसायिक हुँदा भावी पुस्तालाई सहज हुने इंगित गर्दै भनिन् । यस वर्ष बढी विदेश गएकी गायिकाले जापान, अस्टे्रलिया, बेलायत, जर्मनीजस्ता देशबाट कार्यक्रमका लागि अफर आएको बताइन् ।
यी पश्चिमा देशबाट पूर्वी पहाडी जिल्ला जाऊँ, जहाँ उनको जन्म भयो । नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत उनका बुबा विष्णुकुमार पन्त जागिरको सिलसिलामा तेह्रथुमको आठराई पुगे । त्यहीँ उनले भेटे मनु योञ्जनलाई । मामाघरमा जन्मेकी (उनी ३ वर्षकी हुँदा पन्त परिवार काठमाडौँ सर्‍यो) अञ्जुको कलिलो मनमा त्यहाँको सांगीतिक माहोलले सम्भवतः अमिट छाप छाड्यो । 'मम्मी तामाङ सेलो गाउनुहुन्थ्यो,' उनले बाल्यकाल सम्झिन्, 'बुबा पनि गायक भन्दा हुन्छ, मिठो गीत गाउनुहुन्छ ।'
रुचि र प्रभाव हुनु एउटा कुरा, त्यसले अङ्कुराउने र फस्टाउने मौका पनि त पाउनु पर्‍यो ! त्यस्तो सहयोग उनलाई फुपु जानकी केसीबाट मिल्यो । फुपुले (स्वर्गीय) कृष्णमान डंगोललाई चिनाइदिएपछि आफुले गायनमा पाइला अघि बढाएको बताउँछिन् अञ्जु । २०५३ सालमा रेडियो नेपालमा रेकर्ड गराएको 'मन वा मन नै योगी बनाऊ' बोलको गीत नै उनको पहिलो रहेछ ।
तर धेरै भएको छैन अञ्जुको स्वर मन पराइन थालेको । खासमा उनलाई हिट बनाउने गीत भनेकै 'न बिर्सें तिमीलाई' हो । २०६० सालमा पति मनोजसँग उनको 'गाथा' एल्बम निस्कियो जसको 'यस्तो कथा रै'छ, संसारमा माया पनि' गीत रुचाइयो । भारतीय गजल गायक जगजीत सिंहसँग उनले गाइन् 'संयोग' एल्बमको 'कस्तो माया देखेँ आज, टप्प टिपुँजस्तो' । कस्तो लाग्यो त जगजीतसित गाउँदा ? तर आलोकश्रीले संगीत दिएको उक्त एल्बमको त्यो गीत त अलग-अलग रेकर्डिङ गरिएको पो रहेछ । 'उहाँसँग फोनमा मात्र कुरा भयो,' मुसुक्क हाँस्दै उनले भनिन्, 'तर उहाँले मेरो गीत सुन्नुभएको रहेछ । मलाई आशिर्वाद दिनुभयो ।'
अञ्जुको गायनको रफ्तार देख्दा उनले भारतीय गायिकाहरू आशा-लताले झै गीत संख्यामा रेकर्ड बनाउँछिन् कि जस्तो लाग्छ । उनले तीन सयभन्दा बढी नेपाली फिल्ममा गीत गाइसकेकी छन् (अञ्जु उदयको राम्रो पाटो भनेको उनले यसअघि नारी स्वरका लागि गीत रेकर्ड गर्न मुम्बईस्थित भारतीय गायिकाको ढोका ढकढक्याउने नेपाली संगीतकारलाई त्यसबाट मुक्त गरिदिएको छ) । 'एउटा फिल्ममा २ देखि ५ वटासम्म गीत हुन्छ,' उनी भन्छिन्, 'अब हिसाब गर्नुस् त ।' ४-५ सय जति कलेक्सन एल्बममा आफ्ना गीत समेटिएको उनको आकलन छ । ०६३ सालमा रिमेक गीतको एल्बम 'कम्पन' निस्किएको थियो । अहिले उनी हाल अमेरिकामै रहेका पति मनोजसँगको एल्बम 'कोसेढुंगा' (जसको 'कस्तो मिलन भयो हाम्रो, जिन्दगानी फुलैफुलको थुँगो हुँदैन' बोलको गीत आफ्नो पय रहेका बताइन्) प्रबर्धन गर्दैछिन् ।
अनौठो कुरा के भने, यतिका गीत गाइसक्दा र एल्बम निस्किसक्दा पनि अहिलेसम्म उनको सोलो एल्बम आएको छैन । सोलो रचनाकार (रोशन पाल्पाली), सोलो एरेञ्जर (पवन लामा) भएको एल्बम निस्किसक्दा किन अञ्जु पन्तका मात्र गीतको एल्बम बजारमा छैन ? यसको जवाफ उनी आफैसँग समेत छैन । अञ्जु भर्साटाइल गायिका हुन् भन्नेमा शंका छैन । उनको स्वर नेपाली नायिकालाई ठ्याक्कै सुहाउँछ । उनी एक उत्कृष्ट प्लेब्याक सिङ्गर हुनुका साथै स्टेज पर्फमर पनि हुन् -गायनपछि उनको रुचि नृत्यमा छ) । कतिपयले उनलाई अरुणा लामासँग पनि तुलना गर्छन् । आफु लोकपि्रय हुनुको श्रेय उनी समयलाई दिन चाहन्छिन् । भन्छिन्, 'सयम बलावान छ । मैले जे गाउँदा पनि मन पराइएको छ ।'
यही मन पराइले नै हुनुपर्छ, उनको पोल्टामा दर्जनौ अवार्ड परेका छन् । दुई वर्षअघिमात्र उनले एकै साल छिन्नलता नव प्रतिभा पुरस्कार, कान्तिपुर टेलिभिजन र एफएमबाट अवार्ड पाइन् । हिट्स एफएम, अन्नपूर्ण एफएम, कालिका एफएम आदि अनेकौ अवार्ड हात पारेकी छन् -के के अवार्ड पाएको भन्ने उनी आफैलाई राम्रो जानकारी छैन) ।
यी अनेकौँ अवार्डले उनको धुमबाराहीस्थित फ्ल्याट सिँगारिएको हुनुपर्छ । गएको शनिबार मात्रै इमेज टुबोर्ग अवार्डमा उनले उत्कृष्ट आधुनिक गायिकाको उपाधि हात पारिन् । तालीको गडगडाहटबीच कालोमा रातो बुट्टा भएको सारी चोलोमा सजिएकी उनी मन्द मुस्कानसहित झकिझकाउ स्टेजतिर लम्किन् । उनको हिँडाइमा आत्मविश्वास झल्किन्थ्यो । सायद 'स्टार अपिल' हो कि, एक दिन अघिमात्र त्यहीँ भेटिएकी अञ्जु पन्त यिनै हुन् भनेर विश्वास गर्न मुश्किल परिरहेको थियो ।